उमालेको अन्डा को फाइदा के हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
जर्दीले केही पदार्थ समावेश गर्दछ, म बिर्सिएको छु, मस्तिष्क, लेसिथिन वा केहीको लागि, र प्रोटीन १००% प्रोटिन हो
अन्डाले स्तन क्यान्सरको विकास रोक्न मद्दत गर्दछ। अण्डाले यी गुणहरू तिनीहरूको उच्च कोलोन सामग्रीको कारण प्रदर्शन गर्दछ। यद्यपि तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि क्यालोन क्यान्सर रोकथामको लागि मात्र हो। राम्रो स्मृति को लागी, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यो पहिल्यै थाहा छ कि कोलोन शरीरको सबै कोशिकाको लागि महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी नर्वस टिश्युको कोषहरूको लागि जुन यो बिना सामान्य रूपमा काम गर्न सक्दैन। यो कोलोन हो जसले हामीलाई उत्कृष्ट मेमोरी प्रदान गर्दछ र हृदय स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्दछ।
डाक्टरहरूले पत्ता लगाएका छन् कि प्रति दिन 455 24 मिलीग्राम वा बढी कोलाइन सेवन गर्नाले स्तन क्यान्सरको जोखिम २ 125,5% ले कम गर्दछ। एउटा अण्डा (अमेरिकी) मा करोलिन को बारे मा3मिलीग्राम हुन्छ। यो जान्छ कि क्यान्सर रोकथाम गर्न तपाईले प्रति दिन eggs-। अण्डा खानुपर्दछ।
खाद्य पदार्थ * मा पोषण सामग्री को रूसी तालिकाका अनुसार, १०० ग्राम चिकन अण्डामा ine100० मिलीग्राम कोलोन हुन्छ, त्यो हो, पूरै दैनिक मापदण्ड पहिले नै आइसकेको छ। रसियामा उनीहरू कम्तिमा grams 570 ग्राम तौलका अण्डाहरू बेच्छन, दैनिक कोलोनको दुई अण्डाहरू ढाकिएको छ, अमेरिकामा भन्दा आधा जति। अमेरिकीहरू वा तिनीहरूका वैज्ञानिकहरूमा कसले विश्वास गर्ने तपाईं माथि निर्भर छ।
खाना पकाउँदा चोलिन बिग्रिहाल्दैन, त्यसैले उमालेको अण्डा खानु उत्तम हुन्छ, जहाँ कोलाइन कच्चा अण्डा जत्तिकै हुन्छ। फ्राइड अण्डाहरूमा उत्पादनको १०० ग्राम 548 100 मिलीग्राम यो याद राख्नु पर्छ कि कोलीन प्रोटीनको अण्डाको जौंमा मात्र आधारित हुन्छ, यो त्यस्तो छैन।
बटेर अण्डाहरूमा, कोलोन १०० ग्रामको हिसाबले mg०० मिलीग्राम भन्दा बढी हुन्छ। तर बटेर अण्डा साना हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई बढी चाहिन्छ।
कोलाइन किण्वित दुध उत्पादनहरू (केफिर र दही) मा फेला पर्दछ, तर उत्पादनको १०० ग्राम प्रति १ mg मिलीग्राम भन्दा बढीको मात्रामा। फ्याट क्रीम र choline खट्टा क्रीम मा, उत्पादन को १०० g प्रति १०० मिलीग्राम भन्दा बढी, साथै कुटेज चीज मा। मासु उत्पादन मध्ये, अफल (मस्तिष्क) मा सबै भन्दा choline र यो बुझ्न सजिलो तंत्रिका कोषहरूको मुख्य तत्व हो। १०० g गोमांस मस्तिष्कमा १ 15 g० g choline हुन्छ, जुन यसको उत्तम स्रोत हो, जुन कि, प्राप्त गर्न सबैभन्दा गाह्रो छ। र माछा मा खट्टा क्रीम भन्दा बढी।
कोलीनको ट्रेस प्लान्टको खानामा समाहित हुन्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई ध्यानमा पनि लिनुहुँदैन।
त्यसोभए, प्रश्नको उत्तर, अण्डाहरू केका लागि उपयोगी छन्? स्पष्ट Choline मस्तिष्क समारोह सुधार र स्तन क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ। सायद स्तनको क्यान्सरको घटनामा भएको वृद्धिले यस तथ्यसँग ठ्याक्कै जोड पुर्‍याएको छ कि हालै कम क्यालोरीयुक्त खाना महिलालाई सेल्युलाईटको उपचारको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा अण्डाहरूको अस्वीकृति पनि समावेश छ।
यस बीच, हामीसँग खाना कोलाइनको कुनै अन्य स्रोत छैन। ट्याब्लेटमा अण्डाहरू अस्वीकार गर्नुहोस्, कोलाइन पियो (वा लेसिथिनले स्नायु प्रणालीको कोषाहरूमा यसलाई कोलीनमा परिणत गर्दछ)।
अण्डा 200g प्रतिस्थापन गर्दछ। क्यालोरी मासु
म शीर्षकबाट जवाफ दिनेछु, तर यो शुरुमै छ: अण्डा यति स्वादिष्ट छ! म उसलाई माया गर्छु!
हप्तामा २- eggs अण्डा खान सिफारिस गरिन्छ
कुखुराको अण्डाले हाम्रो शरीरलाई प्रोटीन र आवश्यक भिटामिन, एमिनो एसिड प्रदान गर्दछ।
अण्डामा एक दर्जन भन्दा बढी भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन् (ए, बी २, बी,, बी १२, ई, डी, के, फलाम, आयोडिन, क्याल्सियम, सोडियम, म्याग्नेशियम, जिंक, फोलिक एसिड, फास्फोरस, राइबोफ्लेभिन, आदि।) अण्डाको खोराहरू कोलोनको सबैभन्दा धनी स्रोत हो। , जुन कोषहरूको कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विशेष गरी मस्तिष्क कोषहरूको। एन्डसेलमा पनि धेरै उपयोगी तत्वहरू हुन्छन्: क्याल्सियम, फ्लोरिन, तामा, फलाम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, सिलिकॉन र अन्य। शेल दुबै उमालेको अण्डा र कच्चा एकबाट med मिनेट उमाले पछि उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यसो भए कफि ग्राइन्डर, मोर्टार वा केवल रोलि pin पिनमा प्लनोक र मैदानबाट सफा हुन्छ। पौष्टिक मान शेल वा जर्दीको रंगमा निर्भर हुँदैन। अण्डाको स्वाद राम्रो फीडको साथ, जर्दीको स्वाद द्वारा निर्धारित गरिन्छ, र अण्डाहरू स्वादिष्ट हुनेछन्।
उपयोगी संरचना र केमा उमालेको कुखुराको अण्डा उपयोगी छ।
फ्याट, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटको अतिरिक्त, अण्डामा भिटामिन, जैविक र अजैविक पदार्थ हुन्छ, अमीनो एसिडजसबिना मानव शरीर सजिलैसँग अवस्थित हुन सक्दैन।
भिटामिन ए रेटिनोल। रेटिनोलको बहुमूल्य गुणहरूलाई हल्कासित लिनु हुँदैन किनभने यो मानव शरीरको धेरैजसो रेडक्स प्रक्रियाहरूमा सहभागी हो। भिटामिन एले प्रोटीन संश्लेषणलाई नियन्त्रित गर्दछ र मेटाबोलिज्मलाई सामान्य बनाउँदछ, कोशिका झिल्लीको कार्यमा मद्दत गर्दछ, हड्डीको ऊतकको गठनमा ठूलो महत्त्व राख्दछ, नयाँ कोशिकाको गठन र विकासलाई बढावा दिन्छ, बुढेसकालको प्रक्रियालाई ढिलो बनाउँछ र बोसो तन्तुहरूको जमाव नियमन गर्दछ।
भिटामिन एको सहायताले रोडोपसिन पिगमेन्ट बन्छ, जसले व्यक्तिलाई गोधूलि दृष्टि, आँखालाई ओसिलो बनाउने र कोर्नियाहरूलाई चोटपटकबाट जोगाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। भिटामिन एले शरीरको सुरक्षात्मक कार्यहरू सामान्य गर्न मद्दत गर्दछ, छाला उपकला कभरलाई पुनर्स्थापित गर्दछ र यसको अतिरिक्त, यो एक धेरै शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्ट हो।
कुखुराको अण्डमा रहेको भिटामिन बी १, थायामिन, फ्याट र कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिज्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशमध्ये एक हो, कोषको विकास र हृदय र स्नायु जस्ता प्रणालीहरूको कामका लागि आवश्यक छ।
Riboflavin भिटामिन B2।
मलाई पक्का केवल एक चीजको लागि थाहा छ: अण्डाहरूमा प्रोटीन हुन्छ। र यो पनि एउटा अण्डा १ k.c केसीएलमा।
25 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 4,054 प्रश्नहरू।